Vagadziri Fedora naGentoo Vanosiya Teregiramu Yekushandisa App Kugadziridza | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri Fedora uye Gentoo Vanosiya Teregiramu Desktop App Kugadziriswa
Mumwe wevagadziri ari kutarisira kuchengetedza iyo Teregiramu Desktop mapakeji yekuparadzirwa kweLinux Fedora uye mune iyo RPM Fusion repository akazivisa munguva pfupi yapfuura kuburikidza nepositi vabvisa mapakeji kubva munzvimbo dzekuchengetedza.
Uye ndizvo izvozvo sarudzo iyi inouya nguva imwe chete ku chiito chandinotora zuva rapfuura Gentoo Telegraph package maneja, iyo zvakare yakazivisa kupera kweTeregiramu Desktop rutsigiro rwekugovera. Muzviitiko zvese izvi, zvinoratidza kuti ivo vakagadzirira kudzorera mapakeji kuzvivakwa kuitira kuti muchengeti mutsva awanikwe, akagadzirira kutora kugadzirisa mumaoko avo.
Zvikonzero zvekuramba yevachengeti vemazuva ano kutsigira Teregiramu Desktop mukati meaya maviri akakurumbira ekuparadzira Linux inonzi hunhu hunosemesa uye hutsinye hwevanogadzira , que havamboedze kutsvaga mabugs zvichitungamira kumatambudziko nekuvaka kubva kunobva pane kugoverwa kweLinux.
Meseji pamusoro pezvikanganiso zvakadaro dzinovharwa nechiratidzo "WONTFIX" uye kurudziro yekushandisa semi-proprietary binary inovaka kubva kune yepamutemo saiti.
Mune meseji yakatumirwa naVitaly Zaitsev (uyo aive achitarisira iyo Teregiramu Desktop mapakeji eFedora neRPM Fusion)
Mhoroi munhu wese! Nhasi izuva rakakura.
Ini pakupedzisira ndakafunga kubvisa iyo Fedora uye RPM Fusion Telegraph Desktop package nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
1. Vane nharaunda ine hukasha uye ine chepfu kune vanokwidza kumusoro kweGNU / Linux. Zvikanganiso zvese zvine chekuita nekugoverwa zvichavharwa ipapo ne "WONTFIX, shandisa yedu hafu yekudyara mabhinari, akaenzana akabatanidzwa kuUbuntu 14.04 LTS maraibhurari, kubva kune yepamutemo webhusaiti".
2. Ndakachengeta akawanda eGUU / Linux mapakeji kwemakore gumi nematanhatu uye handisati ndamboona ruvengo rwakadai kumusoro. Vanoedza nepavanogona napo kutyora mumapaketi anovaka uye zvakanyanya uye zvakanyanya zvinoda kugadziriswa mukuburitsa kwese. Ivo vanogara vachiti: "Isu tinotsigira chete static inovaka, kana iwe uchida kuigovana -> zvigadzirise iwe pachako."
3. Iwe haugone kukumbira rubatsiro kumusoro kwerwizi mumapakeji anovaka, ivo vanokuregeredza. Muenzaniso munguva pfupi yapfuura ivo vakabvisa rutsigiro rwezvivakwa zvinopesana neQt <5.15.
4. Kana iwe uri muchengeti weGNU / Linux, ivo vanokubata iwe semuvengi. Vanokuvenga. Kana chero munhu achida kuitora, inzwa wakasununguka, asi usakanganwa iyo 1-4 mapoinzi.
Mamiriro acho akawedzeredzwa nenyaya yekuti nyaya dzinodzivirira mapakeji dzinovaka nguva dzose mukuburitsa mukuburitswa kutsva, uye kuyedza kwese kwekugadzirisa kukwirisa kwakadzika kunouya kune zvirevo zvekuti vanogadzira vanongotsigira chete static zvinongedzo tg_owt uye matambudziko ese paunenge uchigadzira ako ega magungano anofanira kugadziriswa zvakasununguka. .
Semuenzaniso, rutsigiro rwekuvaka neQt shanduro dzakaderera pane 5.15 rakamiswa nguva pfupi yadarika uye zvese zvikumbiro zvekugadzirisa nyaya neimwe nzira zvakangofuratirwa.
Uyewo kunyongana kuzhinji kwe kurongeka kwe Teregiramu Desktop pasuru inovakachii izvo zvinonetsa kugadzirisa.
Zvakanaka, zvirimo purojekiti yakakamurwa kuita mana akasiyana masitoreti (kunyorera, raibhurari yebrbrc, zvinyorwa zveiyo cmake compilation system uye raibhurari yekugadzirisa kurira), asi imwechete chete inochengeterwa basa rekunyora shanduro uye mamwe matatu ari kungovandudzwa sekufambira mberi kunoenderera pasina kuita.
Uye zvakare, kubva pakataurwa nezve matambudziko ne kuumbwa kunokanganiswa nemakakatanwa ekuvimbika izvo zvinomuka kana uchiedza kupa rutsigiro Wayland uye x11, PulseAudio uye ALSA, OpenSSL uye LibreSSL.
Chekupedzisira, nezve chinzvimbo cheimwe divi rekukonana zvinosvika pakuti chokwadi mazhinji mameseji nezvematambudziko haana basa kana anokurumidza kugadziriswa, uye kusawirirana kuri mukusada kutsigira shanduro dzekare dzeQt nekubatanidza zvine simba ne tg_owt raibhurari pane yako.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo nezve katsamba, unogona kutarisa ruzivo chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vagadziri Fedora uye Gentoo Vanosiya Teregiramu Desktop App Kugadziriswa
Eya, pachinzvimbo chekugumbuka, vangadai vakaita zvematongerwo enyika kana vachipa meseji kuti nekuda kwematambudziko anounzwa nekambani kuomerera pakushandisa chete uye chete nesoftware yayo yekuumba chirongwa ichi pamwe nekuramba kutsigira dzimwe shanduro dze Qt, ivo vanokurudzira kushandisa iyo flathub vhezheni iyo inovandudzwa uye haifanire kunge iri dambudziko kana ichiuya yakarongedzwa se flatpak
Chero bedzi ichiri kuwanikwa paFlathub ini ndingadai ndisina dambudziko ...
asi zvakaipa achitungamira Teregiramu
Muchiitiko changu (kunyangwe ruzivo rwangu rwuri mu manjaro) ndakamira kurodhaunira kubva kumatura pandakaona kuti haina kuvandudzwa kazhinji zvine chekuita neiyo "yekutanga vhezheni" saka ini ndakaburitsa chikumbiro kubva papeji reTeregiramu ndikachizungunura munaMangu home uye voila, muchimiro cheWindows Firefox, kana ini ndichivhura application kana paine yekuvandudza, inozvirodha yega uye ichokwadi ndechekuti, inoshanda chaizvo.
Ini ndanga ndisingazive nezve iyi sarudzo, pamwe nekuti ini ndanga ndisati ndaida iyo, asi ini ndinonyora pasi. Zvamunotaura nezveFirefox yeWindows, nemiwo mune izvo muLinux kana mukazvitora kubva pawebhusaiti yepamutemo, saka, kana ndisina kukanganisa, ndaizozvifananidza neFirefox, asi Linux mune mabhanari.
Kune rimwe divi, ini ndinokurudzira iwe zvakare edza iyo Flathub vhezheni, iyo inogadziridzwa munguva pfupi uye haina kupa matambudziko. Chete sesarudzo.
Portal 2 inogamuchira kumwe kugadziridzwa kweDXVK neimwe yekuvandudza
Linux 5.12 RC1 Inosvika Pasina Oregon Simba Rokubuda Kwevhiki